LibreOffice XML फिल्टरहरू सँग काम गर्दा
XML फिल्टरहरूको बारेमा
LibreOffice XML ढाँचामा कागजातहरू भण्डार गर्छ . तपाईँंले LibreOffice भित्र अन्य ढाँचाद्वारा प्रयोग गरिएको नेटिभ खुल्ला कागजात रूपान्तरण अनुकूलन फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ. ति फिल्टरहरू LibreOffice भित्र इन्टिजर चिन्ह गरिएको हुन्छ त्यसैले तपाईँंले तिनी ढाँचाहरू लाई पारदर्शी रूपले लोड र बचत गर्न सक्नुहुन्छ.
एउटा XML फिल्टर सिर्जना गर्नलाई, तपाईँ सँग XML र XSLT को बारेमा राम्रो ज्ञान हुनै पर्दछ। यि ज्ञानहरू यो मद्दतको क्षेत्र देखी बाहिर हुन्छन।
एउटा XML फिल्टरमा XSLT भाषामा लेखिएको शैलीपानाहरू समाविष्ट हुन्छन। शैलीपानाहरूले खुला कागजात फाइल ढाँचा बाट अन्य XML ढाँचामा निर्यात र आयात फिल्टरहरूबाट परिवर्तन परिभाषित गर्दछ। यहाँ तिन प्रकारका XML फिल्टरहरू छन:
XML फाइल ढाँचाहरू
Title is: %PRODUCTNAME XML फिल्टरहरू सँग काम गर्दा